कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो तर १० अर्ब किन उठेन ?
सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पूर्ण मन्त्रालयको बेरुजु हेर्छ । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएपछि कुन कुन मन्त्रालयको बेरुजु छ भनेर हेरिन्छ । यसबारे विभिन्न उजुरी पर्छन् । सभापति र सचिवले संवेदनशील विषयमा बैठक राख्नुहुन्छ । यसैक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विषय आएको छ । आएका विषयमा को कसरी बोल्यो । मर्यादिन वा अमर्यादित को भयो ? रेकर्ड नै छ ।
प्रश्न प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजुको हो । जुन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो । यो सकारात्मक कुरा हो । कुनै व्यक्तिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन सक्छन् । नेपाली संस्कृतिमा केही राम्रो गर्ने बित्तिकै देवत्वकरण गर्ने र नराम्रो हुनासाथ राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यो ठीक होइन । लेखा समिति सार्वभौम हो । यसो हेर्दा कुलमानजीले उज्यालो दिनुभयो ।
उहाँ एक जना व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यहाँ प्राधिकरणको टिम थियो । त्यसको साथमा सरकार थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व उहाँले दिनुभयो । यसका लागि उहाँ सह्रानीय नै हो । हामीले राम्रै भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्छु भन्नुभएको छ । यो लक्ष्य हो । लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । यहाँ कुलमानको मात्र प्रश्न होइन । प्राधिकरणमा भएको बेरुजुको पनि हो । दिपेश खड्का